सीपको सम्मान- सम्पादकलाई चिठी - कान्तिपुर समाचार
‘सीपको सम्मान’ लेखले प्राविधिक शिक्षाको अवस्था घतलाग्दो गरी प्रस्तुत गरेको छ  । वास्तवमा सीपको मूल्यांकन अंकमा होइन, तहगत वा ग्रेडमा हुनुपर्छ  ।
हामीकहाँ जे काममा पनि खालि डिग्री हेर्ने चलनले काम बिगारिरहेको छ ।
हातमा कुनै सीप हुन्न, प्रमाणपत्रले के काम गरोस् ? मेरो विचारमा सीपको सम्मान नहुनुको एउटा कारण यो पनि हो । नत्र त कृषि, निर्माण, विद्युत्, मेकानिक्सजस्ता विषयमा स्तरीय सीप बोकेका व्यक्तिले समाजबाट सम्मान पाइरहेकै छन् । अर्कातिर सबै प्राविधिक शिक्षालय आफैंमा स्तरीय पनि छैनन् । पूर्वाधार नहेरी, राजनीतिक दबाबमा खुलेका प्राविधिक शिक्षालयका कारण यो क्षेत्रमा बढी बेथिति फैलिएको हो ।
गुणस्तरहीन जनशक्तिले सम्मान पनि कसरी पाओस् ? त्यस्ता शिक्षालयको स्थापनादेखि उत्पादनसम्म गुणस्तर ख्याल गर्नुपर्छ । प्रवेश परीक्षा, अनुगमन, सुपरीवेक्षण, परीक्षा प्रणालीमा समेत सरकारी र गैरसरकारीको भावना नराखी उत्पादित जनशक्तिले समान अवसर पाउने वातावरण बनाउनुपर्छ । निजी र सरकारी संस्थामा प्रयोग गरिने रसायन, भौतिकी र जनशक्तिको मापदण्ड कदापि फरक पर्नु हुँदैन । १० देखि ४ बजेसम्म खुट्टा हलाउने कार्यलाई रोजगारी बुझ्ने संस्कारको अन्त हुन सके सीपको सम्मान स्वतः हुँदै जान्छ ।
– भगवान झा, केन्द्रीय उपाध्यक्ष, निजी प्राविधिक शिक्षालय महासंघ नेपाल
प्रकाशित : श्रावण १९, २०७६ १०:२९
हामी हरेक पाइलामा कर तिर्छौं  । जन्मँदा, विवाह गर्दा, छोराछोरी पढाउँदा, मर्दासम्म करकै कुरो आउँछ  ।
सियोदेखि सुनसम्म, नुनदेखि गाडीसम्म किन्दा कर तिरेकै हुनुपर्छ । जागिरको तलब लिँदा होस् या अस्पतालको खर्च तिर्दा, कर तिर्नुपरेकै हुन्छ । यहाँसम्म कि हामीले खाडी मुलुकबाट रगत र पसिना बेचेर केही ल्याउँछौँ नि, त्यसमा पनि कर तिर्छौं । विदेशमा मरेका आफन्तको शव ल्याउँदासमेत कर तिर्छौं ।
त्यो करको रिटर्न ब्याक खोइ ? देशमा सडक छैन, दुर्गममा पुल छैन, गरिब पढ्ने स्कुल छैन, भोकमरीले मान्छे मरेका छन् । हामीले तिरेको कर नेता, मन्त्री र तिनका आफन्तको विदेश सयरका लागि हो ? नेतालाई महँगा गाडी किन्न हो ? राजनीतिक दलका कार्यकर्ताले खोलेका गाई फार्म, ब्युटी पार्लर, होटलको उद्घाटनमा जानका लागि हेलिकप्टर चार्टर गर्न हो ? यस्तै हो भने हामीले अबदेखि कर किन तिर्नु ? जवाफ चाहियो सरकार !
– रमेश भुजेल 'उदासी', thuletule@gmail.com